Brooch Chinhu cheizvi zvishongo ndechekuti apa pakashandiswa dombo rakakura rakaomarara iro rakaiswa kune isingaonekwe (yemhepo) furemu. Jewelle Design maonero anovhura chete mabwe akavanda musangano tekinoroji. Iro dombo pacharo rakabatwa nemairi maviri, unobtrusive magadzirirwo uye mutete sahani yakarukwa nemadhaimani. Iri ndiro ndiro hwaro hwese rinotsigira chimiro brooches. Inobata uye dombo repiri. Hupamhi hwese hwakagadzirwa hwave kugona mushure meyekutsanangudza huru dombo rekukuya.
Tarisa Bangili Mutsipa Uye Brooch Upcycled Zvishongo Rin'i Brooch